Sidee loo kala helay xirmooyinkii shidaalka ahaa ee ay Kenya sheeganaysey kaddib go’aankii ICJ?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sidee loo kala helay xirmooyinkii shidaalka ahaa ee ay Kenya sheeganaysey kaddib...
Sidee loo kala helay xirmooyinkii shidaalka ahaa ee ay Kenya sheeganaysey kaddib go’aankii ICJ?!
(Hadalsame) 18 Okt 2021 – Macluumaad ay idaacadda VOA ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kadib xadaynta ay Maxkamadda Caalamiga ah ee Garsoorka ICJ ka samaysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay inay ku jiraan shidaalka iyo khayraad kale ay marayaan dhinaca Soomaaliya ee xuduudda cusub.
Previous articleTOOS u daawo: Juventus vs AS Roma, Barcelona vs Valencia – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article”Ma naqaan sida ay hubkan ku sameeysteen!” – Shiinaha oo sirdoonka Maraykanka ku kediyey gantaal guuxiisa ka dheereeya oo dunida dhan kusoo wareegaya + Sawirro & Muuqaal